Home Wararka Suudan $23 Bilyan ayaa Laga khafiiyey, Somaliya $5 Bilyan ayey weli La’adahay
Suudan $23 Bilyan ayaa Laga khafiiyey, Somaliya $5 Bilyan ayey weli La’adahay
Dalka Sudan oo wax badan naga dambeeyey ayaa waxaa la gaaray bartii go’aanka (decision point) si looga cafiyo dhammaan deymihii dunida ay ku lahayd sida ku cad warbixinada IMF ee halkaan ku lifaaqan.
$23 Bilyan ayaa laga khafiifiyey Sudan, halka weli aynu la daalaa dhaceyno $5 bilyan. Dadka Somaliyeed waxay is weydiinayaan aaway deyn cafintii muddada afarta sano ay Beyle, Kheyre iyo Farmajo dadka Somaliyeed ay fagaare walba ka naadinayeen inay soo dhow dahay. Beeney Nacallaa kugu taal adiga iyo cidda sheegtaba.
Rabbi ma asturo madaxda ama hogaamiyayaasha ummadda aamintay been u sheega wuuna ka shifaa oo waliba ceebeeyaa, waana tan hadda haysata madaxda Somalida, iyadoo kuwa soo socdaana laga rabo inay ku cibra qaataan:
Farmajo halka uu rabbi soo dhigay oo ah isagoo jooga ay dalka howlo badan ka socdaan waxna aan laga weydiineyn oo xataa la leeyahay hala fogeeyo yuusan nijaaseynin waxa socdee.
Kheyre oo ogaa inay been tahay waxa shacbiga lagu marin habaabinayo ee deyn cafinta ah oo rabbi kaga fogaaday duhur cad ayaa kursigii uu dartiis Rabbi uga fogaanayey looga qaaday 7 daqiiqo, waxaasa xanuun iyo jaahilnimo ka sii weyn ah leh weli inuu rabo inuu mar kale maamulka dowliga ah ku soo noqdo oo uu weliba noqdo ninka ugu sarreeya ee go’amadiisa la diidi Karin si Somaliya looga iibiyo dhammaan Shidaalkeeda Norway iyo Ruushka oo uu hadda bil ka hor ka soo noqday si qarsoodi ah.
Beyle oo runtii beentaan meel walba la taagnaa oo lahaa berri, saad dambe ama saakuun ayaa la cafinayaa deynteennii hadda waxaa uu ku dambeeyaa inuu idaacadaha gaarka loo leeyahay tuugsi ka bilaabay, kadib markii la la’ayanay mushaarkii Ciidanka iyo shaqaalaha. Waayo lacagtii taalllay waxaa loo wareejiyey Farmajo iyo villada si loogu galo doorashada.
Sudan waxaa gaartay halkii laga khafiifin lahaa deyn dhan $23.3 billion, halka ay NN la daalaa dhaceysay $5 Bilyan oo nus ku dhawaad uu yahay dulsaar ah. Sababaha Somalida ugu fashilantay deyn cafintii uu Beyle naadinayeen afar sano ayey dhaqaaleyahannu ku sheegeen:
Maamulxumo musuqmaasuq iyo been ay hareysay dhamaan hawlaha dowladda NN.
Iyadoon laga wareegay in la adeegsado dadkii aqoonta u lahaa ee dunida tusin karay xaqiiqda.
Dowladda oo ka soo bixi la’ shuruudihii ay iyadu laab la kaca ku soo aqbashay oo aysan ka fiirsan inay fulin karto sida doorashadii beenta ahayd ee ay qof iyo cod ee ay sheegeysay in ay dalka oo ay Xamar Nuskeed ka taliso ka qaban karto.
Isku soo duub, Beenaalayaal Rabbi ma asturo madaxda soo socota ha ku waano qaateen foolxumada ku dhacday Beyle, Kheyre, Fahad iyo Farmajo, iyadoo haddii uu maamul cadaalad ah yimaado lagula xisaabtami doono wixii ay galeen oo gef qaran ah.